Sacuudiga iyo OPEC+ oo u hoggaansamay hanjabaadda Trump
Russia iyo dalalka OPEC ee Sacuudiga uu hoggaamiyo ayaa dejiyey qorshe ay wax soo saarkooda saliidda ceyriin ku dhimayaan 20%, kadib cadaadis ka yimid Mareykanka.
Kooxdan oo loo yaqaan OPEC+ ayaa sheegay in heshiis kama dambeys ah uu ku xiran yahay Mexico inay wax ka saxiixdo kadib markii ay diiday codsi horey loogu jeediyey inay wax soo saarka ku dhinto.
Wada-hadallada wasiirada tamarta ee dalalkan ayaa la filayaa inay dib u billowdaan maanta.
Qorshahan la dejiyey ayaa ah in wax soo saarka saliidda ee dalalka OPEC+ lagu dhimo 10 milyan oo barmiil maalinkiiba, taasi oo ah 10% guud ahaan wax soo saarka caalamka, ayada oo 5 milyan oo barmiil oo kalena la filayo inay dhimaan dalalka kale ee aan ku jirin kooxda.
Dalabka shidaalka caalamka ayaa hoos u dhacay 30 milyan oo barmiil maalinkii ama 30% sababo la xiriira cudurka Coronavirus, ayada oo diyaaradihii ay joojiyeen duulimaadyada, dadkuna aysan kaxeyn baabuurtooda, oo badankood ay guryaha ku xiran yihiin.
Waxaa taas sii dheer in Sacuudiga ay sare u qaadeen wax soo saarkooda, ayaga oo ku xumeynaya Ruushka, si qiimaha saliidda uu hoos ugu dhaco.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ugu hanjabay Sacuudiga inuu tallaabo ka qaadayo haddii aysan xallin suuqa saliidda caalamka ee wax soo saarka dheeriga ah ee aan loo baahneyn uu qiimo tiray.
Trump ayaa sheegay in Sacuudiga ay wajihi karaan cunaqabateyn iyo canshuur dheeri ah, haddii aysan dhimin wax soo saarkooda oo horseeday in suuqa saalidda Mareykanka uu qiimo dhac weyn ku dhaco.
Aqalka Cad ayaa sheegay in Trump uu sidoo kale taleefon kula hadlay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo boqor Salmaanka Sacuudiga, si ay u xalliyaan qiimo dhaca saliidda ee ka dhashay wax soo saarka dheeriga ah.